China Rock Wool Insulation Boad warshad iyo saarayaasha |Kingflex
Dhagax dhogorta dahaarka Boad
Waxqabadka Muhiimka ah
Luminta kulaylka yar
Biilasha tamarta hoose
Dhismaha la ilaaliyo
Isbeddelka heerkulka hoose
Arimo qoyan oo yar
Kingflex dhagaxa dhogorta dahaarka waxaa inta badan loo isticmaalaa gidaarka dibadda.Waxay la socotaa saqafka, samee baqshadda dhismo kasta, ilaalinta qof walba iyo wax kasta oo gudaha ah.
Waxay sidoo kale daboolaan aagga dusha sare ee ugu weyn, iyaga oo ka dhigaya aagga ugu muhiimsan ee ka hortagga luminta kulaylka.Meesha ugu muhiimsan ee kuleylku ka lumo waa adigoo ka baxsanaya derbiyada aan fiicnayn.
Nuxurka Ku-Dridda Dagaalka
Shidaal aan ahayn
lehKingflex guddiga dahaarka dhogorta dhagaxa, Goobaha nolosha waxaa laga dhigi karaa diirimaad, tamar tayo leh oo waafaqsan heerarka dhismaha casriga ah - iyo sidoo kale helitaanka faa'iidooyin dheeraad ah oo ku saabsan dhawaaqyada, raaxada gudaha iyo badbaadada dabka.
Soo ogow muhiimada dahaarka u leeyahay gidaarada dibadda, iyo saamaynta togan ee ay keeni karto.waxay leeyihiin faa'iidooyin badan sida miisaanka fudud, waxqabadka wanaagsan ee guud ahaan iyo iskudhafka hoose ee kuleylka kulaylka.Waxay kala yihiinballaaranloo isticmaalo dhismaha iyo kuwa kalewarshadahagudaha garoonka ilaalinta kulaylka.Waxa kale oo ay leedahay shaqo wanaagsan oo ah nuugista codka, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo buuqa warshadaha iyo wax ka qabashada nuugista codka ee dhismaha.
Kingflex dhogorta dhagaxa ah waxaa lagu soo saaraa basalt dabiici ah oo ah walxaha ugu muhiimsan, oo lagu dhalaalay heerkul sare oo laga sameeyay abio-fibers macmal ah xawaare sarecentrifugalqalab, ka dibna lagu daray agglomerates gaar ah iyoboodhka u adkaystasaliid, kululaynta iyo xoojisay galay noocyada kala duwan ee dhogorta dhagaxyada ilaalinta kulaylka ee tilmaamayaasha kala duwan sida waafaqsan shuruudaha kala duwan.
Looxyada dhogorta dhagxaanta looxyada dhogorta dhagaxa ah ee aan biyaha celin karin
cabbirka mm dhererka 100 ballac 630 qaro weyn 30-120
cufnaanta kg/m³ 80-220
Kingflex dhagaxa dhogorta dahaarka waxay udub dhexaad u tahay horumarinta derbiyada tamarta waxtarka leh, oo buuxiya shuruudaha code-ka casriga ah iyada oo siinaya dahaarka joogtada ah ee guryaha, ganacsiga iyo dhismayaasha warshadaha.
Hore: bustaha dahaarka kulaylka dhogorta dhagaxa
Xiga: Dhuunta dhogorta kuleylka leh ee dhagaxa
Dhagaxa Wool Boad
Dhagax Wool Board Comfort
Guddiga dahaarka kulaylka caagga ah
Duubista xaashida dahaarka ee Kingflex Rubber
dhuumaha goonida ah 1/4 "ID